​यी चारै जनालाई कोरियामा सफलता
काठमाडौं – कोरियाको इन्चियन शहरमा आयोजना भएको ‘५औँ लक्जरी ब्राण्ड मोडल अवार्ड ः ग्लोबल फेसन वीक २०१८’मा विक्रम आदित्य महासेठ, अदिति अधिकारी, रुविष्का श्रेष्ठ र आदर्श ज्ञवालीले बिभिन्न अवार्ड पाएक छन् । नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै अवार्डमा सहभागी भएका विक्रम र रुविष्का श्रेष्ठले ‘ब्राण्ड अनररी एम्बेसडर अफ एलबिएमए’ अवार्ड जितेकी छन् भन् अदितिले ‘फेसनिन्स्टा एण्ड ब्राण्ड अनररी एम्बेसडर फर जे जुन कस्मेटिक प्रोडक्ट’ र आदर्श ज्ञावलीले… विस्तृत समाचार
​लक्ष्मीको ‘कोही कोही मान्छे’ सार्वजनिक
काठमाडौं । बेलाबेलामा फरक फरक गीत दर्शक श्रोताको मन जित्दै आएकी गायिका लक्ष्मी आचार्यले नजिकिदै गरेको तिहारलाई लक्षित गर्दै देउसी भैलो गीत ‘कोही कोही मान्छे’ सार्वजनिक गरेकी छन् । देउसी भैलो संस्कृतीले भरिएको आकर्षक भिडियो सहित उनले यो गीत सार्वजनिक गरेकी हुन् । उनकै स्वर रहेको गीतमा शब्द तथा संगीत भने जय देवकोटाको रहेको छ । थुप्रै सहायक कलाकार प्रयोग गरिएको गीतको भिडियोमा लिड उनी… विस्तृत समाचार
​दार्जिलिङपछि काठमाडौंमा लभ स्टेशन
काठमाडौं । चलचित्र लिली विलीबाट लोकप्रियता हासिल गरेका जोडी प्रदीप खडका र जसिता गुरुङ अभिनित अर्को चलचित्र लभ स्टेशनको यतिबेला काठमाडौँमा छायाँकन भइरहेको छ । यो चलचित्रको दुईवटा गीत बाहेकको बाँकी छायाँकन तिहारअघि नै काठमाडौंमा सकिँदैछ । दार्जिलिङ, कालिङपोङ, खार्साङ, मिरिकमा ६० प्रतिसत छायाँकन सकेर दशैंलगत्तै निर्माण टोली नेपालको इलामको पशुपतिनगर आएको थियो । एक साताको इलाम बसाईमा पशुपतिनगर, फिक्कल, इलाम, कन्याम र श्रीअन्तुमा २०… विस्तृत समाचार
​रेश्माको ‘उल्लु’ गीत (भिडियोसहित)
काठमाडौं । कुनै समय ‘मै ठूली भइछु रे’ गीतमार्फत हट लिस्टमा रहेकी गायिका रेश्मा सुनुुवार फेरि चर्चामा आएकी आएकी छन् । लामो समय गायनमा ओझेलमा रहेकी रेश्माले ‘उल्लु’ बोलको गीत तथा भिडियो सार्वजनिक गरेकी छन् । द बिस्पा र इन्टेस ईल्डको निर्माण रहेको यस गीतको भिडियोलाई हलिउड फ्लेवरमा तयार गरिएको छ । बिभोर पोख्रेलको निर्देशन रहेको भिडियोमा कोरियोग्राफी र लिड मेल मोडलमा अनुराग ठकुरी रहेका… विस्तृत समाचार
​‘आखिर केको लागि ?’ लोकार्पित
काठमाडौं । गीतकार रविन बान्तवा खाहोङ राईद्वारा लिखित तथा संगीतकार डा. शरद सिन्हाद्वारा संगीतबद्ध गीतहरूको एल्बम ‘आखिर केको लागि ?’ लोकार्पण गरिएको छ। राजधानीको बत्तीसपुतलीस्थित शिल्पी थिएटरमा आयोजित कार्यक्रममा वरिष्ठ संगीत साधक तथा गायक प्रेमध्वज प्रधानले एल्बमको लोकार्पण गरे । एल्बम लोकार्पणपश्चात् बोल्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रधानले आफ्नो समय र अहिलेको समयमा गीतसंगीत विधामा निकै परिवर्तन आएको उल्लेख गरे । उनले शब्द, संगीत र गायन… विस्तृत समाचार
विशिष्ट गीति पुरस्कारबाट शम्भुजीत पुरस्कृत
१७ कार्तिक २०७५
काठमाडौं । बरिष्ट संगीतकार तथा नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति शम्भुजीत बासकोटा ‘अनेसास राष्ट्रकवि माधव घिमिरे विशिष्ट गीत पुरस्कार–२०७५’ बाट पुरस्कृत भएका छन् । शुक्रबार साँझ काठमाडौंमा एक समारोहबीच अन्तराष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज (अनेसास)का तर्फबाट २१ हजार १०० रुपैयाँ सहित बासकोटालाई पुरस्कृत गरिएको हो । सोही कार्यक्रममा अनेसास विशिष्ट सम्मान २०७५ बाट संस्कृतिविद चेनत कार्कीलाई सम्मानित गरियो । कार्यक्रममा अनेसास योगदान सम्मानबाट कवि… विस्तृत समाचार
निलमको ‘कति सुहायो कालो कोटमा’ (भिडियोसहित)
काठमाडौं । संगीतकार तथा गायिका निलम रोजु राईको नयाँ गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । केही समयअघि मात्र ‘मलाई हजुरले लाएको टोपी मनप-यो’ गीतको भिडियो ल्याएकी निलमले यसपटक ‘कति सुहायो त्यो कालो कोटमा’ बोलको गीत ल्याएकी छन् । गीतकारसमेत रहेकी निलमको ‘कति सुहायो त्यो कालो कोटमा’ बोलको नयाँ गीतको भिडियो शुक्रबार सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक गीतमा स्वरमात्र नभएर शब्द तथा संगीत पनि उनैको रहेको… विस्तृत समाचार
अनिताका सिर्जनामा नारी आवाज
काठमाडौं । यतिबेला नारी हिंसा विरुद्ध सामाजिक संजाल तातिरहेको छ । कवि अनिता लामाले भने राजधानीमा कवितामार्फत नारी सशक्तिकरणको वकालत गरिन् । धुम्बाराहीस्थित महिला सामुदायक कार्यक्रम संचालन समिति र महिला सामुदायिक केन्द्रले गरेको एकल कविता बाचनमा उनले अधिकांश सिर्जनामा नारी आवाजलाई बुलन्द पारिन् । हालै तेस्रो कविताकृति ‘आतुङ’ सार्वजनिक गरेकी उनले ‘सलाम आदरणीय आमाबुबा’ कवितामार्फत वाचन थालेकी थिइन् । जन्मदिने आमा र बुबाको महिमागानपछि ‘नागरिकता’… विस्तृत समाचार
​पाँच तस्बिरमा बेली डान्सर विनु
काठमाडौं । कलाकारितामा पनि विभिन्न विधामा रमाउन चाहनेहरु छन् यहाँ । मोडलिङ, अभिनय, गायन र नृत्यजस्तै कोहीचाहिँ बेली नृत्यमा रमाउन चाहन्छन् । त्यस्तै, बेली डान्समै रमाउँदै आएकी छन्, विनु शाक्य । विनु बेली डान्समा प्रखर छिन् । उनको बेली डान्स हेरेर मख्ख नहुने सायदै कमै होलान् । मोडलिङ र बेली डान्सलाई एकैसाथ अँगाल्दै आएकी विनुलाई यहाँ तस्बिरमा प्रस्तुत गरिएको छ । विस्तृत समाचार
​सोनिकाको कामुकतामा को–को लठ्ठिए ? (भिडियो)
काठमाडौं । नेपाली फिल्म ‘चौका दाऊ’को नयाँ गीत ‘मेरो मायाँ कतारमा सँधै हतारमा’ रिलिज गरिएको छ । निर्माण संस्था सौर्य प्रोडक्सनले यो गीतको भिडियोलाई यु–ट्युबमार्फत रिलिज गरेको हो । आगामी २७ पौषबाट देशव्यापी सिनेमा हलमा प्रदर्शनमा आउने यो फिल्मलाई सौर्य प्रोडक्सनले निर्माण गरेको हो । फिल्मका कथाकार एवं परिकल्पनाकार बरिष्ट संगीतकार शम्भुजीत बासकोटाले यो गीतको संगीत गरेका हुन् । श्रीपुरुष ढकालको शब्द रहेको उक्त गीतलाई… विस्तृत समाचार